Mampianatra ny alika hamerina ny baolina | Tontolo alika
Milalaova amin'ny alika misy tombony be dia be amin'ny fivoarany. Tsy vitan'ny hoe mampitombo ny fahaizanao sy manatsara ny fahaizanao ara-batana sy maotera io, fa manampy amin'ny fanamafisana ny fifamatoranao aminay ihany koa ary mampihena ny adin-tsainao sy ny fanahianao. Ny lalao baolina dia iray amin'ireo malaza indrindra, ary na iza na iza milaza ny baolina fa kilalao ankafiziny. Saingy ny olana dia tonga rehefa tsy maintsy averin'izy ireo ny baolina, satria tsy ny olon-drehetra no manao izany.
Ampianaro ny alika ahodina ny latabatra Tsotra izany, indrindra raha toa ka mihaino ny alikantsika. Amin'ny karazany tsy miankina sy maditra kokoa dia mety haharitra indroa amintsika ny halavany, fa raha te hanatratra azy isika, ny zavatra ilaintsika dia ny mahafantatra ireo dingana ary manana faharetana lehibe. Ho hitantsika tsikelikely ny valiny, satria miaraka amin'ny alika dia mila mamerina isika mba ho zatra izany.
Ny zavatra voalohany tokony hataontsika dia mitady kilalao izay ahitan'izy ireo fahalianana lehibe. Matetika izy ireo dia tia baolina tenisy matetika, satria mora azony izany ary mipoaka be izy ireo, ka fanamby ho azy ireo ny maka azy ireo. Ho anao dia kilalao mahafinaritra izy io satria mora ihany koa ary mora hita. Tokony hatsipintsika any aminy ny baolina ary avelao izy handeha haka azy.
Ny zavatra voalohany fanaon'izy ireo matetika dia ny manatona antsika, fa tsy ny rehetra no mandatsaka ny baolina, te-hanomboka izy ireo a lalao manenjika. Rehefa tonga any amintsika dia tsy maintsy manana zavatra mahaliana kokoa noho ny baolina izy ireo hamoahany azy. Asehoy azy ny loka ary avelao izy ireo hametraka ny baolina, alainay izany ary omentsika azy ny loka. Ka amin'ny farany dia hampifandraisin'izy ireo ny famoahana ny baolina amin'ilay loka. Tsy maintsy averinao im-betsaka izany, ary avy eo ovao ny loka ho an'ny fikolokoloana. Farany, ho hitantsika fa mamoaka ny baolina izy rehefa tonga. Na dia noho izany aza dia tsy maintsy averintsika im-betsaka, na dia andro maromaro aza.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » Training » Ampianaro ny alika hamerina ny baolina
Ahoana no hahalalana raha ny alikako dia amin'ny lanjany tsara